Maalinta: Ogast 2, 2019
6-billaha ah ee 133 Kun Gawaarida Gawaarida ee ka timaada Porsche AG
Porsche AG waxay kordhisay dakhligeeda iibka adduunka oo dhan 2019 lixdii bilood ee ugu horreeyay 9. Porsche AG waxay ku dhawaaqday natiijooyinkeedii ugu horreeyay ee lix bilood ee 2019. Dakhliga iibka ee Porsche [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Eskişehir waxay si joogto ah u qabataa nadiifinta taraamka maalin kasta si ay muwaadiniintu ugu safraan iyagoo maskaxda ku haya. 47 tram oo la kulma adeegga gaadiidka dadweynaha ee dadka Eskişehir, 22.00 iyo 06.00 saac walba fiidkii [More ...]
'' 2019 Grand Prix of Hungary '
Inta badan duuliyeyaasha waxay bilaabeen shaqooyinkooda; Hungaroring leh qaloocyo badan oo fiiqan oo u dhow Budapest sidoo kale waxay ku xasuusineysaa maalmahaas maxaa yeelay waa xawaaraha ugu hooseeya ee xawaaraha go'an. Si kastaba ha noqotee, tan [More ...]
Wadada Tareenka ee Magaalada Crazyways Ayaa Bixin Doonta 6 Km Rail Maalin
Turkey bilaabay in ay keenaan warshadaha maxaliga ah iyo kuwa wadaniga ah dhaqaaqayo dhawaaqa. Tallaabooyinka laga bilaabay difaaca iyo warshadaha hawada waxay ka dhigayaan quluubteena mid aad u fiican. HaberMarmara waxay wacdaa Wadada Tareenka ee waalan ee Turkiga, ayaga oo raadinaya xadiidka 6 km maalin kasta [More ...]
Turkey Chambers iyo is-weydaarsiga Stock Midowga (TOBB), hoos imaanaya hoggaanka Siyaasadda Dhaqaalaha Turkey Research Foundation of Turkey (TEPAV) isagoo la kaashanaya Midowga Yurub (EU) ee maal iyo Bursa Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha (BCCI) fuliyay iskaashi [More ...]
Qoraal ayaa lagu shaaciyay warka ku saabsan jawaabta Wasiirka Turhan ee Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha ee su’aalaha la weydiiyay ee ku saabsan garoonka diyaaradaha Istanbul. Halkan waxaa ah Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha Dhaqaalaha ee Istanbul [More ...]
Ururka Ankara Bar Association, 1928 ee taariikhda xarunta Ankara Railway Station Campus TCDD guriga martida ayaa soo saartay bayaan ku saabsan wareejinta Jaamacadda Medipol. Bayaanka oo dhan ee ay soo saareen Ururka Ankara Bar Association waa sidan soo socota: [More ...]
Midowga Degmooyinka Marmara iyo Duqa Kocaeli Assoc. Dr. Tahir Büyükakın wuxuu sii wadaa inuu si dhow ula socdo howlaha ka socda khadka metrooga Gebze Darıca, kaas oo kusii socda qaab frenetic ah. Ku sii wad Gebze Town Square [More ...]
Agaasinka guud ee IETT Ayazağa garaashka adeega adeega iibsiga adeega iibinta ee loo xilsaarey shaqaalaha, qandaraaska iyo qandaraaska wuu sii shaqeyn doonaa isagoon wax saameyn ah gaarin. Maanta, wargeysyada qaar waxay caddeeyeen in iET IETT xasuuqday shaqaalaha ” [More ...]
Maalintii ugu horreysay ee 76 oo ay Madaarka Istanbul si rasmi ah u shaqo bilaabatay, waxaa soo baxday in tiro rikoor ah oo kiisas pass ah ay ka dhacday. [More ...]
Mid ka mid ah Wadooyinka Taksiilaha oo ku burburay Maddaarka Istanbul
Bilowgii Abriil, mid ka mid ah jidadka tagaasida ayaa lagu daryeelay gegada diyaaradaha ee Istanbul, halkaas oo gaadiid buuxa laga qaatay. Sida laga soo xigtay Airporthaber, 5-6 ka dib xiritaanka garoonka diyaaradaha Ataturk ee rakaab rakaab ah, wuxuu howlo ka bilaabay Maddaarka Istanbul bishii Abriil. [More ...]
Wadada tareenka ayaa kusii socota mashruuca Ankara Sivas YHT
Mid ka mid ah dariiqyada muhiimka ah ee marinka tareenka ee isku xira waddammada Aasiya dariiqa Aasiya Yar iyo Silk Road isla markaana dhigaya tareenka isku xidha jihada Yerköy-Sivas ee Mashruuca Ankara-Yozgat-Sivas YHT kaas oo yareyn doona Yozgat Ankara inta u dhexeysa daqiiqadaha 55 [More ...]
Hawlaha Wadooyinka Horusocod ee Bursa
Duqa magaalada Bursa Alinur Aktas, oo ah 'magaalada si fudud looga heli karo' iyada oo hadafku yahay in uu sii wado howlaha uu ka wado degmooyinka oo dhan ayaa sii wada waddo aan kala go 'lahayn, ayuu yidhi. Dawlada Hoose ee Magaalada Bursa, oo ku taal badhtamaha magaalada [More ...]